Filohan’ny CFM : “Mila hamafisina ny fepetra” | NewsMada
Filohan’ny CFM : “Mila hamafisina ny fepetra”
“Na ho an’ny mpanatanteraka na ho an’ny vahoaka tokony hiharan’ny fepetra: tokony hohamafisina ny fepetra ara-pahasalamana, henjanina bebe kokoa izany. Izay no hita fa mahomby. Ny fanaovana arovava, ohatra, ny elanelana iray metatra, ny famerana ny fivezivezena, ny tsy fitangoronana…”
Io ny nambaran’ny filohan’ny Conseil du fampihavanana malagasy (CFM), i Maka Alphonse, manoloana ny fiatrehana ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 amin’izao fotoana izao. Araka ny hita, maro ny Malagasy no mafy loha tsy manaraka fepetra; eny, na eo aza ny sazy manao asa iombonana, mbola maivamaivana mitaha ny any amin’ny firenen-kafa. Nefa misy fanagadrana sy lamandy henjankenjana ny an’ny sasany any. Koa niangaviany hanaraka fepetra ny rehetra.
Raha nahomby ny ady nataon’ny tany Chine, nihenjana ny fitondram-panjakana ary nanaraka ny olona. Toy izany ny Korea Atsimo, Ale­maina… Ireo firenena izay somary goragora ny fampiharana izany toy ny any Bre­zila, ohatra: miparitaka izai­tsizy ny valanaretina.
“Tsapa sy hita fa misy mitarika fizarazarana eo amintsika samy Malagasy, ary misy ny mandranitra an’izany. Hita koa fa misy mitarika fikorontana ary misy ny manao an’izany”, hoy izy. Izay ny mahatonga ny CFM manahy eo amin’ny lafiny rehetra, na sosialy na toekarena na politika. Misy ny olona manao fanahy iniana amin’izao fotoana izao: hararaotina io valanaretina io mba hanelezana tsaho sy hanaratsiana ny fitondrana sy ny zava-miseho rehetra.
Izay koa no nahatonga ny CFM nanao antso avo mba hisian’ny fihavanana sy ny firaisankinan’ny Malagasy. Hita fa sarotra ny fitantanana ny valanaretina Covid-19. Ajanona kely aloha ny hambom-po politika. Aoka samy hifantoka amin’io valanaretina io ny ady atao.